को बन्लान् नेकपा चितवनको अध्यक्ष ? – Saurahaonline.com
को बन्लान् नेकपा चितवनको अध्यक्ष ?
सौराहा अनलाइन | २०७५, ५ जेष्ठ शनिबार
चितवन, ०५ जेठ । पार्टी एकीकरणसँगै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अस्तित्व सकिएको छ । उनीहरु दुवै पार्टी विलय भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरेका छन् ।
केन्द्रमा नेकपाको अध्यक्षको रुपमा दुई जना रहेको भएपनि जिल्लामा तहमा भने एक जना मात्रै अध्यक्ष रहनेछन् । पार्टी एकीकरण भयो, पुराना संरचना हराए, अब एमाले र माओवादी केन्द्र रहेन । यो सँगै आम जनसमुदायमा नयाँ प्रश्न उब्जिएको छ अब जिल्लामा जिल्ला अध्यक्ष को बन्ला ?
सबैको कौतुहता हुनु पनि जरुरी हो । मुलुकको ठूलो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको चितवन जिल्ला कसले हाँक्ला त अब ? पूर्व एमाले र माओवादी मध्ये केही नेताहरुको नामको चर्चा सुरु भएको छ नेकपा चितवनको अध्यक्षका लागि ।
पार्टी एकतासँगै चितवनको जिल्ला अध्यक्षमा जेएन (जगन्नाथ) थपलिया, कृष्णभक्त पोखरेल, ईश्वरी भट्टराई र यामबहादुर परियारको नाम चर्चामा आएका छन् । यी चार वटै व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन् । यी नाम मध्ये केन्द्रीय नेतासँग जसको बढी पहुँच छ उ नै नेकपा चितवनको अध्यक्ष हुने सम्भावना प्रलब देखिएको छ ।
चितवनमा जिल्ला अध्यक्ष पूर्व एमालेका नेताहरुबाट पर्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । नेकपाका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चितवनकै भएका कारण पनि पूर्व माओवादीबाट जिल्ला अध्यक्ष हुने सम्भावना कम देखिएको हो । यद्यपि ओलीलाई मनाउन सकेको खण्डमा भट्टराई चितवनका अध्यक्ष हुन सक्छन् । तर यो सम्भावना निकै कम देखिएको छ ।
अब नेकपा चितवनको जिल्ला हाँक्ने भनेको पूर्व एमालेका नेताहरुले नै हो । थपलिया र पोखरेल मध्ये थपलियाको पल्ला भारी हुने देखिन्छ नेकपा चितवनको नेतृत्वको लागि । नेकपाको उच्च स्रोतका अनुसार पार्टीमा सबैलाई स्थान दिनको लागि एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा अगाडि सारिदैछ ।
कृष्णभक्त पोखरेल चितवनबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यस्तै उनको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि रहेको छ संघीय संसदमा । पोखरेल संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिको संयोजक समेत हुन् । त्यसकारण पनि पोखरेल अधिकांस समय केन्द्रमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले जिल्लामा समय दिन नसक्ने हुँदा जिल्ला अध्यक्ष पोखरेललाई नदिने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।
सबै कुरालाई मिलाउँदा नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष जेएन थपलिया बन्ने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । थपलियाले एमाले अध्यक्ष भएर जिल्लाको नेतृत्व समेत सम्हालिसकेका छन् । थपलियालाई संगठनमा बौद्धिक नेताको रुपमा समेत चिनिने गरेको र नेकपा केन्द्रीय कमिटिका अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्रको रुपमा समेत लिने गरिएको छ ।
थपलियाले ओली तथा दाहाल दुवै नेतालाई मनाउन सक्ने भएकाले नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष बन्ने सम्भावना धेरै रहेको चितवनका पुराना कम्युनिष्ट नेताहरु समेत बताउँछन् ।